DHAKHTAR HA QALAN HOOYADA IYO ILMAHA UURKA KU JIRA SI'AAD LACAG U HESHO
Tuesday January 05, 2021 - 17:10:52 in Maqaallo by Wariye Khaliil Barre
DHAKHTAR HA QALAN HOOYADA IYO ILMAHA UURKA KU JIRA SI'AAD LACAG U HESHO Salaamad iyo samo la kulan ayaan rajaynayaa guga 2021, ma ihi qoraa, mana ihi siyaasi, qalinkana uma qaadan cid gaara inaan ku aflagaadeeyo, balse dhacdooyin xanuun badan oo jira, oo aan laga hadal oo nolosheena asaas u ah baa jira, in laga hadlaana ay tahay waaji halku dhiga NOLOSHA HOOYADA UURKA LEH MACNO AYAY LEE DAHAY (MUM & BABY LIVES IS MATTER)
Hooyada waxay xaq u leedahay ilmaheeda inay si caadi ah u dhasho, Hooyada iyo ilmaheedu waxay xaq u lee yihiin in noloshooda hantidoon iyo lacag inaan loo Alan oo loo dilin. Waxa caadi noqotay in 80% haweenka ama hooyada foolata ay qaliiin lagu sameeyo oo ay Hooyada iyo ilmuhu israacaan, kala hadhaan ama badbaadaan Deegaanada Soomalida/Somaliland degto oo dhan marka laga reebo Jibuuti iyo Jijiga oo cusbitaaladoodu yihiin kuwo si caadi ah bulshada uge adeega.
Balse Goobaha kale waxaa cusbitaalada loo abyey ee loo samaystay in laga sameeyo lacag waa caadi,
balse nidaamkani waa mid dhibaato qof lagu abuurayo oo aan jirin lagu hodmayo sifo aan ku haboonayn, aqoon iyo dabarro iyo sharciyo addag oo lagula xisaabtamo cusbitaaladaas iyo dhakhaatiirtaasina ma jirto, dawlad iyo shacab haday boqolaal dilaan, ciqaabta aad maqli kartaa waa Dhakhtar baa la masafuriyey kuwa soomalida ah sharcigu maba qabto.
Haddaba iyadoo caafimaadka guud khatartaas ku jiro waxaan hooyada u xushary ayaa ah halista uguweyn ee jirta iyo in hadaynu sidan ku socono is dabar go'ynayno.
Si cusbitaalku ui bixiyo kharashka, nalka, kirada, Daawada, mushaharka dhakhatiirta, kalkaliyaaasha caafimaad, shidaalka, waddayaasha iyo howlaha kale faa’iidona loo helo sida ugu fudud ee loo bixin karaa waa in la hello HOOYO UUR LEH oo la qalo. Waa xaqiiqo jirta in KHARASHKA CUSBITAALKU ka soo baxo 60% hooyooyinka uurka leh oo lagu qallo. Waxase jirta in ka yar 7% keliya inay qaliin u baahnayeen, halka 53% soo hadhay tahay qaliin aan saxsaneyn oo kharash cusbitaalka looga dhigayo.
Waa arrin xanuun badan oo daamiirka iyo maanka ka weyn, waa dembi iyo gef weyn oo bulshada laga galay taasoo Dowlad, Sheekh, Maayar iyo cid ka hadashaa, waa gacan ku dhiigle shaadh cad, dhakhaatiirtaasu waxay marka horeba khiyaanadooda ka bilaabaan in qofka laga saxeexo in wixii yimaada aanu masuul ka ahayn si aan loola xisaab tamin, baddanaa oo baddanaa inta gacantooda iyo khalad qaliin oo ay sameeyeen xabaal u gashay labo calina aanay is weydiin. Waa Xeelad caadi ah oo Cusbitaaalada ganacsiga ah laga isticmaalo .
waxaa hadda halibut ay tahay in iyana ay ku biiraya kuwa dowlada. Haweenka foosha waa la qallanayaa, waxaa la odhanayaa waa la jeexayaa, waa ma maraa waa erey ganacsi ‘Jeexaya/Qallaya” . Xiligan lagu jiro waxaad odan kartaaba malaha ma jirto, haween si caadi u dhashaa gaar ahaan magaalooyinka dhakhaatiirta/cusbitaalada gaarka loo lee yahay ka jiraan. Maaha malle awaal, mana aha sheeko suuq, waa xaqiiqooyin iyo dhacdooyin muddo dheer isasoo tarayey oo aan arkay tusaale; waxaan lee yahay ehel iyo qaraabo ku nool magaalooyinka iyo miyiga iyo tuulooyinka, maba maqlo dadka baadiyaha ku nool qof dumara oo limihii lagu qalay ama la jeexay. Balse magaalada 4 dumara ee foosha 3 baa birtu saran tahay. Wxaan bulshada usoo jeedinayaa in arrintaas af, aqoon, tallo, sharci, diin, dowlad, wixii laga Laban karo laga qabto oo aan sidaa lagu eegan.